Turkiga oo ciidamo iyo tababarayaal u soo diraya Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
Turkiga oo ciidamo iyo tababarayaal u soo diraya Soomaaliya
Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Magaaladda Muqdisho Olgan Bekar oo waraysi siiyay Jariirada Daily sabax ee ka soo baxda Turkiga, ayaa sheegay in bisha September si rasmi ah loo furi doono saldhiga milateriga ee ay ka hirgaliyeen duleedka caasimadda Muqdisho, islamarkaana la bilaabi doono tababarada la siinayo ciidamadda Soomaalida ah.
Sidoo kale Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya magaaladda Muqdisho Olgan Bekar ayaa tilmaamay in Turkigu doonayo in uu caawiyo dowladda Soomaaliyeed si ay dib ugu soo celiso awoodii dowladnimo, kala dambayntii iyo isxukunkii.
”300 boqol oo askari ayaa imaanaya bisha August oo isugu jira 100 tababare iyo 200 askari oo ilaalin doono saldhiga milateri ee Muqdisho oo haatan gabo-gabo ku dhow” ayuu yiri Olgan Bekar, wuxuu kaloo sheegay in ay tababari doonaan Saraakiisha Ciidamadda Soomaalida ee milateriga iyo sidoo kale If you are still looking for your Ranitidine at a lower price than on the most of the market, you’ve found it! buy Ranitidine only for $0.43 right here! ciidamada gaarka ah.
dhawaan Dowladda Turkigu waxay magaaladda Muqdisho ka dhistay saldhigii ugu weyn ee milateri oo meel ka baxsan wadankeeda ka dhisto, waxaana la filayaa in lagu tababaro ilaa 3,000 askari oo Soomaali ah.
Rwanda waxa ka furmay shir lago hadlay in dalalka afrika ay si xor ah isku dhax maraan
Diyaaradda Turkish Airline oo ay u suurtageli weyday inay ka degto Garoonka Aadan Cadde